विश्वप्रकाश शर्माले किन भने एमालेलाई नक्कली मेस्सी ? « Pahilo News
विश्वप्रकाश शर्माले किन भने एमालेलाई नक्कली मेस्सी ?
प्रकाशित मिति : 31 October, 2016 5:10 pm
१५ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा नक्कली मेस्सी बनेर मैदानमा छिरेको आरोप लगाएका छन् । काभ्रेको कुशादेवीमा सोमबार आयोजित कांग्रेसका संस्थापक नेता देवीप्रसाद सापकोटाको गौरवसभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
‘लोकमानबारे बोल्ने एमाले पहिलो होइन,’ शर्माले भने, ‘लोकमानबारे संसदमा कुरा उठाउने कांग्रेस पहिलो हो । तर, एमाले मेस्सीको जर्सी लगाएर नक्कली खेलाडी बनेर छिर्यो । मेस्सीको नक्कली जर्सीमा एमाले छिरेपनि गोल भने कांग्रेसले नै गर्छ ।’
उनले् कांग्रेसले ढिलै भएपनि महाभियोगकै पक्षमा निर्णय गर्ने समेत बताए । उनले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले छलफल हुनुलाई अनौठो मान्न नहुने पनि दाबी गरे । ‘कांग्रेस लोकमानलाई हटाउने पक्षमा पहिला पनि थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यही पक्षमा छ ।’
नेता शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहँदा सस्तो सपना देखाएर लोकप्रियता बटुल्न सफल भएको पनि दाबी गरे । ओलीकै गृह जिल्ला झापाका शर्माले भने– ‘ओलीले सपना बाँडे पनि संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएकाले सकाररबाट विस्थापित गर्नु परेको हो ।’